Isikhumulo Sezindiza SaseFrankfurt Sibona Ukuwohloka Kwezokuhamba: Isiteleka yisona sizathu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJalimane » Isikhumulo Sezindiza SaseFrankfurt Sibona Ukuwohloka Kwezokuhamba: Isiteleka yisona sizathu
Ezokuvakasha Ezitholakalayo • Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zaseJalimane • Izindaba zikaHulumeni • Investments • Izindaba • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Iziteleka zibe nomthelela omubi kumthamo wabagibeli be-FRA - Iningi lezikhumulo zezindiza zeQembu leFraport emhlabeni wonke libika ukukhula komgwaqo.
NgoNovemba 2019, isikhumulo sezindiza iFrankfurt Airport (FRA) samukele cishe abagibeli abayizigidi eziyi-5.1 - okumele ukwehla ngamaphesenti angu-3.4 uma kuqhathaniswa nenyanga efanayo yangonyaka odlule. Uhlelo lokuncishiswa kwezindiza ebusika kanye nesiteleka sezinsuku ezimbili sabasebenzi baseLufthansa cabin kube nomthelela omubi ezinombolweni zabagibeli. Ngaphandle komthelela wesiteleka, ithrafikhi yabagibeli be-FRA ibizokwehla kancane ngamaphesenti ayi-1.1 unyaka nonyaka.
Ukuhamba kwe-Intercontinental ukuya nokubuya eFrankfurt kuqhubeke nokukhula ngamandla ngamaphesenti ama-2.1. Ngokuphambene nalokho, ithrafikhi yaseYurophu yehla kakhulu ngamaphesenti ayi-6.5 ngenxa yokuqothuka kwezindiza nezinye izinto. Ukunyakaza kwezindiza kwehle ngamaphesenti ama-5.8 kuya kuma-38,790 4.0 ukusuka nokuhlala phansi. Izisindo ezisuselwe ekukhuphukeni okususwayo (ama-MTOWs) nazo zinikezwe inkontileka ngamaphesenti ama-2.4 kuya kumathani ayizigidi ezingama-5.0. Okukhombisa ukwehla okuqhubekayo komnotho womhlaba, ukuhanjiswa kwempahla (okubandakanya ukuhamba kwezindiza kanye ne-airmail) kwehle ngamaphesenti ayi-186,670 kuya kumathani emitha ayi-XNUMX.
Usihlalo wesigungu esiphezulu seFraport, uDkt. Stefan Schulte, uphawule wathi: “Ngemuva kokukhula okuqinile kwezimoto kulo nyaka kuze kube manje, siye sehla kakhulu ngoNovemba, ikakhulu ngenxa yeziteleka. Ngenxa yalokhu, silindele ukuthi ithrafikhi yonyaka wonke yabagibeli eFrankfurt ikhule kancane kancane kunesibikezelo sethu sangaphambilini samaphesenti amabili kuya kwamathathu. Ngaphandle kokukhula kancane kwezimoto, sigcina umbono wethu wezezimali unyaka wonke wezi-2019 - osekelwa ukusebenza kahle kwezezimali okutholakele kuze kube manje eFrankfurt kanye nebhizinisi lethu lamazwe omhlaba. ”
Kuyo yonke iGroup, izikhumulo zezindiza ezikumaphothifoliyo omhlaba jikelele eFraport zisebenze kahle kakhulu ngoNovemba 2019. Ethintwe ukuqothuka komgibeli ophethe izindlu i-Adria Airways nezinye izinto, iLjubljana Airport (LJU) yaseSlovenia ibike ukwehla ngamaphesenti angama-27.0 ezimoto kubagibeli abangama-85,787. Futhi izikhumulo zezindiza ezimbili zaseBrazil iFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA) zibone ukushelela komgwaqo kuhlangene ngamaphesenti angu-2.2 kubagibeli abangaphezudlwana kwesigidi esingu-1.3. Lokhu bekubangelwa ukuqothuka kwe-Avianca Brasil kanye nezindiza zakwa-Azul ezinciphisa iminikelo yazo yokundiza. Isikhumulo sezindiza sasePeru iLima Airport (LIM) saqopha ukweqa okungamaphesenti angu-6.9 kumgwaqo oya
abanye abagibeli abayizigidi eziyi-1.9.
Njengoba kunabagibeli abangu-727,043 sebebonke, izikhumulo zezindiza zaseFrance zaseGraport eziyi-14 zigcine izinga lanyakenye (amaphesenti ayi-0.1). Izikhumulo zezindiza zaseBulgaria iVarna (VAR) neBurgas (BOJ) zibhalise inani labagibeli abangama-83,764 - bekhula ngamaphesenti angama-22.7, noma ngabe kwenziwa ngesiminyaminya sezimoto
Inyanga kaNovemba ngonyaka owedlule.
Isikhumulo sezindiza i-Antalya (AYT) eTurkey samukele abagibeli abacishe babe yizigidi eziyi-1.4, okumele inzuzo yamaphesenti ayi-11.8 unyaka nonyaka. Izimoto zasesikhumulweni sezindiza iPulkovo Airport (i-LED) eSt. Esikhumulweni sezindiza iXi'an (XIY) eChina, ithrafikhi inyuke ngamaphesenti angu-6.8 yaya kubagibeli abacishe babe yizigidi ezingama-1.4.